Sibe nokuhlanganyela okwengeziwe ngegunya likaNkulunkulu ekuhlangeneni kwethu kokugcina , futhi angeke sikhulume ngokulunga kukaNkulunkulu okwamanje. Namhlanje, sizokhuluma ngesihloko esisha sha—ubungcwele bukaNkulunkulu. Ubungcwele bukaNkulunkulu bungesiye futhi isibonakaliso futhi ebuntwini obuyingqayizivele bukaNkulunkulu, ngakho kunesidingo esikhulu sokuxoxa ngalesi sihloko lapha. Le ngxenye yengqikithi kaNkulunkulu engizoxoxa ngaso, kanye nezingxenye ezimbili esixoxe ngazo ngaphambilini ngesimo esilungile sikaNkulunkulu kanye negunya likaNkulunkulu—kungabe konke kuyingqayizivele? (Yebo). Ubungcwele bukaNkulunkulu nabo buyingqayizivele, ngakho isisekelo salobu bungqayizivele, umsuka walobu bungqayizivele, yindikimba yengxoxo yethu namhlanje. Ingabe niyaqonda? Namuhla sizohlanganyela ingqikithi eyingqayizivele kaNkulunkulu—ubungcwele bukaNkulunkulu. Mhlawumbe abanye benu banokusola, futhi bayabuza, “Kungani kuxoxwe ngobungcwele bukaNkulunkulu?” Ningakhathazeki, ngizonixoxela ngesineke. Lapho nizwa niyokwazi ukuthi kungani kubaluleke kakhulu Kimina ukuthi ngikhulume ngalesi sihloko.
Okokuqala masichaze igama elithi “ngcwele.” Ngokusebenzisa ukuqonda kwenu futhi nasolwazini lonke enilufundile, yini incazelo yokuba “ngcwele”? (“Ukuba ngcwele” kuchaza ukungabi nasisihla, ukungabi neze nokonakala noma izici zesintu. Konke okukukhiphayo—noma ngomcabango, ngenkulumo noma isenzo, konke okukwenzayo—kuhle ngokuphelele.) Kuhle kakhulu. (“Ubungcwele” bunobunkulunkulu, bumsulwa, abunakunengwa muntu. Kuyingqayizivele, kuwuphawu oluchaza uNkulunkulu.) Lena incazelo yenu. Enhliziyweni yomuntu ngamunye, leli gama elithi “ngcwele” linesilinganiso, isichasiso kanye nencazelo. Okungenani, uma nibona igama elithi “ngcwele” imiqondo yenu iba notho futhi izincazelo zenu ezithile ngalo ziyasondela ekuchazeni ingqikithi yesimo sikaNkulunkulu. Lokhu kuhle kakhulu. Abantu abaningi bakholwa ukuthi igama elithi “ngcwele” lingelihle, futhi lokhu kungaqinisekiswa. Kodwa ubungcwele bukaNkulunkulu engifisa ukuxoxa ngabo namhlanje ngeke bumane bucaciswe, noma bumane buchazwe. Esikhundleni salokho, ngizosebenzisa amaqiniso athile ukuqinisekisa ukukuvumela wena ukuthi ubone ukuthi kungani ngithi uNkulunkulu ungcwele, nokuthi kungani ngisebenzisa igama elithi “ngcwele” ukuchaza ingqikithi kaNkulunkulu. Ngesikhathi ingxoxo yethu isiphelile, uzozwa ukuthi ukusetshenziswa kwegama elithi “ngcwele” ukuchaza ingqikithi kaNkulunkulu nokusetshenziswa kwaleli gama ukubhekisa kuNkulunkulu kufanelekile kakhulu kanti futhi kulunge kakhulu kokubili. Okungenani, ukuya ngokuthi izilimi zamanje zabantu zinjani, ukusebenzisa leli gama ukuchaza uNkulunkulu kufaneleke kakhulu—ilona lodwa igama olimini lwesintu elifaneleke kakhulu ukubhekiswa kuNkulunkulu. Akulona igama elingasho lutho lapho lisetshenziswa libhekiswe kuNkulunkulu, noma ukunconywa ngaphandle kwesizathu noma ukutusa okungasho lutho. Inhloso yengxoxo yethu ukuvumela wonke umuntu ukuthi abone iqiniso lale ngxenye yengqikithi kaNkulunkulu. UNkulunkulu akakwesabi ukuqonda kwabantu, kuphela ukungaqondi kwabo. UNkulunkulu ufisa ukuthi wonke umuntu azi ingqikithi Yakhe nalokho anakho nayikho. Ngakho njalo uma sikhuluma ngesibonakaliso sobuyena bukaNkulunkulu, singasebenzisa amaqiniso amaningi ukuvumela abantu ukuthi babone ukuthi lesi sibonakaliso sobuyena bukaNkulunkulu sikhona ngempela.
Lezi ziqephu ezimbili ziyingxoxo phakathi kukaNkulunkulu noSathane, futhi zilandisa ukuthi uNkulunkulu wathini nokuthi uSathane wathini. Ingabe kuningi okwashiwo uNkulunkulu? UNkulunkulu akazange akhulume kakhulu, futhi wakhuluma kalula kakhulu. Singabubona ubungcwele bukaNkulunkulu emazwini alula kaNkulunkulu? Abanye bazothi lokhu akulula. Ngakho singabubona ububi obukhulu bukaSathane ezimpendulweni zakhe? (Yebo.) Asiqale ngokubheka ukuthi uhlobo luni lombuzo uJehova uNkulunkulu awubuza uSathane. (“Uvelaphi na?”) Ingabe umbuzo oqondile lona? Ingabe ikhona incazelo efihliwe? (Cha.) Umbuzo nje, kuphela, ongenayo enye inhloso. Uma benginganibuza: “Uvelaphi?” Beningaphendula kanjani? Ingabe umbuzo onzima ukuwuphendula? Ningathi: “Ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo”? (Cha.) Ngeke niphendule kanje, ngakho nizwa kanjani uma nibona uSathane ephendula ngale ndlela? (Sizwa ukuthi uSathane akanangqondo futhi unobuqili.) Ningasho ukuthi ngizizwa kanjani? Njalo uma ngibona lawa mazwi ngizizwa nginengiwe, ngenxa yokuthi ukhuluma ngaphandle kokusho okuthile. Ingabe wawuphendula umbuzo kaNkulunkulu? Amazwi akhe ayengeyona impendulo, kwakungenamphumela. Ayengeyona impendulo eqondiswe embuzweni kaNkulunkulu. “Ekuzuleni emhlabeni, nasekwehleni ngenyuka kuwo.” Ngabe uqondani ngala mazwi? Uvelaphi ngempela uSathane? Niyitholile impendulo? (Cha.) Lobu “ubuhlakani” bobuqili bukaSathane, ukungavumeli noma ubani ukuthi athole ukuthi uthini ngempela. Seniwezwile lawa mazwi, nilokhu ningenakuqonda ukuthi utheni, kepha useqedile ukuphendula. Ukholwa ukuthi uphendule ngokuphelele. Ingabe uzizwa unjani-ke? (Nginengekile) Manje uqala ukunengeka ngala mazwi. USathane akakhulumi ngendlela eqondile, ngalokho ekushiya unwaya ikhanda ungakwazi ukuqonda umthombo wamazwi akhe. Ngezinye izikhathi ukhuluma ngokoqondile, ngobuqili, futhi ngezinye izikhathi ubuswa yingqikithi yakhe, imvelo yakhe uqobo. La mazwi aphuma ngqo emlonyeni kaSathane. Awacatshangwanga isikhathi eside futhi ashiwo nguSathane, ecabanga ukuthi uhlakaniphile; wawasho kalula nje. Lapho umbuza ukuthi uvelaphi, usebenzisa la mazwi ukukuphendula. Uzizwa udidekile kakhulu, uhlale ungazi ukuthi uvelaphi ngempela. Ingabe kukhona abanye phakathi kwenu abakhuluma kanje? (Yebo.) Ingabe indlela enjani lena yokukhuluma? (Iyadida futhi ayinikezi impendulo eqinisekile.) Singasebenzisa amagama anjani ukuchaza le ndlela yokukhuluma? Iyaphambukisa futhi iyakhohlisa, akunjalo? Ake ucabange umuntu engafuni ukuba abanye bazi ukuthi ubekuphi izolo. Uyambuza: “Ngikubonile izolo. Ubuyaphi?” Akakuphenduli ngendlela eqondile ukusho ukuthi uye kuphi izolo. Uthi “Bekuwolunye usuku olumangalisayo izolo. Angive ngikhathele!” Uwuphendulile umbuzo wakho? Yebo, kodwa bekungeyona impendulo obukade uyifuna. Lobu “ubuhlakani” bobuqili bomuntu. Awusoze wathola ukuthi uchaza ukuthini noma uqonde umthombo noma inhloso esemuva kwamazwi akhe. Awuyazi azama ukuyigwema ngoba enhliziyweni yakhe unendaba yakhe uqobo—lokhu umshoshaphansi. Ingabe nani nivamile ukukhuluma ngale ndlela? (Yebo.) Ingabe yini-ke inhloso yenu? Ingabe kwesinye isikhathi ukuvikela lokho okubalulekile kuwena, kwesinye isikhathi ukugcina indawo yakho, isiqu sakho, ukugcina izimfihlo zempilo yakho yangasese, ukulondoloza udumo lwakho? Noma ngabe iyiphi inhloso, ayihlukani nalokho okubalulekile kuwe, ixhumene naloku okubalulekile kuwe. Ingabe akuyona imvelo yomuntu lena? Ngakho-ke ingabe wonke umuntu onalolu hlobo lobuntu akahlobene noSathane? Singakusho lokhu, akunjalo? Ngokujwayelekile, lokhu kubonakaliswa kuyanenga futhi kuyenyanyeka. Nawe manje nizizwa ninengekile, akunjalo? (Yebo.)
Ohlelweni lokuphatha lukaNkulunkulu lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, lezi ziqephu ezimbili ezishiwo uSathane kanye nezinto uSathane azenzayo eNcwadini kaJobe zimele ukumelana kwakhe noNkulunkulu, futhi lokhu uSathane ekhombisa ubuyena boqobo. Uwabonile amazwi nezenzo zikaSathane empilweni yangempela? Uma ukubona, kungenzeka ungacabangi ukuthi yizinto ezikhulunywe nguSathane, kodwa esikhundleni salokho ucabange ukuthi izinto ezikhulunywe ngumuntu. Ingabe yini eboniswayo, uma izinto ezinjalo zikhulunywa ngumuntu? USathane oboniswayo. Ngisho noma umbona, ulokhu ungaqondi ukuthi zikhulunywa nguSathane ngempela. Kodwa lapha namanje ubonile ngokusobala lokho uSathane uqobo lwakhe akushilo. Usunokuqonda okusobala, okucace bha ngobuso obubi kakhulu nokukhohlakala kukaSathane. Ngakho ingabe lezi ziqephu ezimbili ezikhulunywa nguSathane zibalulekile kubantu banamhlanje ukuze bakwazi ukwazi imvelo kaSathane? Ingabe lezi ziqephu ezimbili zifanelekile ukuthi ziqoqwe ukuze isintu namhlanje sikwazi ukubona ubuso obubi kakhulu bukaSathane, ukubona ubuso bukaSathane bangempela basekuqaleni. Nakuba ukusho lokho kungabonakala kungafanelekile kahle, ukukubeka ngale ndlela kusengathathwa ngokuthi kuqondile. Ngingakubeka ngale ndlela kuphela futhi uma ningakuqonda, ngakho kwenele. Kaninginingi, uSathane uhlasela izinto uJehova uNkulunkulu azenzayo, ephonsa izinsolo ngokwesaba uJehova uNkulunkulu kukaJobe. Uzama ukuchukuluza uJehova uNkulunkulu ngezindlela ezinhlobonhlobo, enza uJehova uNkulunkulu ukuthi amvumele ukuthi alinge uJobe. Amazwi akhe ngakho-ke avusa ulaka kakhulu. Ngakho ngitshele, lapho uSathane esewakhulumile la mazwi, uNkulunkulu angabona ngokucacile ukuthi uSathane ufuna ukwenzani? (Yebo.) Enhliziyweni kaNkulunkulu, le ndoda uJobe uNkulunkulu ayibukayo—le nceku kaNkulunkulu, le uNkulunkulu ayithatha njengomuntu olungile, umuntu ophelelisiwe—ingabe angalumela lolu hlobo lokulingwa? (Yebo.) Kungani uNkulunkulu ethi “Yebo” ngokuqiniseka okukhulu kangaka? Ingabe uNkulunkulu uhlale ehlola inhliziyo yomuntu? (Yebo.) Ngakho ingabe uSathane uyakwazi ukuhlola inhliziyo yomuntu? USathane akakwazi. Nakuba uSathane ekwazi ukubona inhliziyo yomuntu, imvelo yakhe embi ayisoze yakholwa ukuthi ubungcwele wubungcwele, noma ukuthi ukungcola wukungcola. USathane omubi akasoze azisa noma yini engcwele, elungile noma egqamile. USathane akukho angakwenza ngaphandle kokwenza konke okusemandleni ukwenza ngokuhambisana nemvelo yakhe, ububi bakhe, kanye nangalezi ndlela azisebenzisayo. Ngisho noma kubiza ukuthi ajeziswe noma abhujiswe nguNkulunkulu, akanqikazi ukuphikisana noNkulunkulu ngenkani—lokhu ukukhohlakala, lena imvelo kaSathane. Ngakho kulesi siqephu, uSathane uthi: “Isikhumba ngesikhumba, yebo, konke lokho umuntu anakho uyakunika ngokuphila kwakhe. Kepha lula isandla Sakho manje, futhi uthinte amathambo akhe nenyama yakhe, futhi uyokukuthuka ebusweni Bakho.” USathane ucabanga ukuthi ukwesaba uNkulunkulu komuntu kungenxa yokuthi umuntu ekade ethole izinzuzo eziningi kakhulu kuNkulunkulu. Umuntu uthola izinzuzo kuNkulunkulu, ngakho uthi uNkulunkulu ulungile. Kodwa akukhona ukuthi uNkulunkulu ulungile, kungenxa nje yokuthi umuntu uthola izinzuzo eziningi kakhulu yingakho engesaba uNkulunkulu ngale ndlela: Uma nje uNkulunkulu emephuca lezi zinzuzo, uzobe eselahla uNkulunkulu. Emvelweni yakhe embi, uSathane akakholelwa ukuthi inhliziyo yomuntu ingamesaba uNkulunkulu ngempela. Ngenxa yemvelo yakhe embi akazi ukuthi buyini ubungcwele, akusaphathwa ukuthi ukuhlonipha okukhulu okunokwesaba kuyini. Akazi ukuthi kuyini ukulalela uNkulunkulu, kuyini ukwesaba uNkulunkulu. Ngoba yena uqobo lwakhe akamesabi uNkulunkulu, ucabanga ukuthi, umuntu naye ngeke amesabe uNkulunkulu, ukuthi kuyinto engenakwenzeka. Ngitshele, uSathane akamubi na? Ngaphandle kwebandla lethu, noma ngabe izinhlobonhlobo zezinkolo namahlelo, noma amaqembu ezenkolo noma ezokuhlalisana kwabantu, abekho kubo abakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, abakholwa ukuthi uNkulunkulu angenza umsebenzi futhi abakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, ngakho bacabanga ukuthi lokho okholelwa kukho nakho akusiyena uNkulunkulu. Umuntu ofebayo ubuka futhi abone wonke omunye umuntu efeba, njengaye. Umuntu oqamba amanga sonke isikhathi ubuka futhi abone ukuthi akekho umuntu othembekile, ubabona bonke beqamba amanga. Umuntu omubi ubona bonke abantu bebabi futhi ufuna ukulwa nabo bonke ababonayo. Kanti labo bantu abanokwethembeka okuqhathanisekayo babona wonke umuntu ethembekile, ngakho bahlala bekhohliswa njalo, bayaphangwa njalo, futhi ayikho into abangayenza. Ngisho lezi zibonelo ezimbalwa ukuze nibe nesiqiniseko kakhulu: imvelo embi kaSathane akuyona into eyimpoqo okwesikhashana noma into edalwa indawo akuyo, noma akusona isibonakaliso sesikhashana esidalwa yinoma isiphi isizathu noma isendlalelo. Akunjalo neze! Akakwazi ukuba okunye ngaphandle kwale ndlela! Akakwazi ukwenza noma yini elungile. Ngisho noma esho into okumnandi ukuyizwa, umane ekuyenga nje. Lapho amazwi akhe anda ngokuthandeka, ukungacasuli, ukuba mnene, yilapho zinonya kakhulu izinhloso zakhe ezimbi ngemuva kwalawo mazwi. Ingabe ubuso obunjani, imvelo enjani uSathane ayikhombisayo kulezi ziqephu ezimbili? (Enomshoshaphansi, enonya futhi embi.) Isimilo sakhe sokuqala sibi, sibi kakhulu futhi sinonya.
Manje njengoba sesiqedile ukukhuluma ngoSathane, asiqhubeke ukukhuluma ngoNkulunkulu wethu. Ngesikhathi sohlelo lukaNkulunkulu lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, incane kakhulu inkulumo eqondile kaNkulunkulu eyabhalwa eBhayibhelini, futhi leyo ebhaliwe ilula kakhulu. Ngakho asiqale ekuqaleni. UNkulunkulu wadala umuntu futhi kusukela lapho wayelokhu ehola impilo yesintu. Noma ngokunika isintu izibusiso, ukubanika imithetho, ukubeka imigomo enhlobonhlobo yempilo, ingabe niyazi ukuthi yini inhloso kaNkulunkulu ngokwenza lezi zinto? Okokuqala, ungasho ngokuqinisekile ukuthi konke uNkulunkulu akwenzayo, ukwenzela ukusiza isintu? Ningacabanga ukuthi lo musho ubanzi futhi awusho lutho, kodwa uma sikhuluma ngempela, konke uNkulunkulu akwenzayo ukuhola nokuqondisa umuntu maqondana nokuphila impilo ejwayelekile. Noma ngabe okokuthi umuntu agcine imigomo Yakhe noma agcine imithetho Yakhe, inhloso kaNkulunkulu ukuthi umuntu angakhonzi uSathane, angalinyazwa uSathane; lokhu kuyisisekelo, futhi lokhu kwenziwa ekuqaleni ngqa. Ekuqaleni ngqa, lapho umuntu engayiqondi intando kaNkulunkulu wathatha imithetho nemigomo elula futhi wenza imibandela eyayiphethe zonke izibonakaliso ongazicabanga. Le mibandela ilula, kepha phakathi kwayo iqukethe intando kaNkulunkulu. UNkulunkulu uyasilondoloza, uyasazisa futhi usithanda kakhulu isintu. Ingabe akunjalo? (Yebo.) Ngakho singasho ukuthi inhliziyo yakhe ingcwele? Singathi inhliziyo yakhe ihlanzekile? (Yebo.) Ingabe uNkulunkulu unazo noma iziphi izimbangela ezingezinhle. (Cha.) Ngakho le nhloso Yakhe yinhle futhi ilungile? (Yebo.) Akukhathaleki ukuthi yimiphi imibandela uNkulunkulu ayenza, ngokuhamba komsebenzi Wakhe yonke inomphumela omuhle kumuntu, futhi iyahola endleleni. Manje ngabe kukhona nanoma yimiphi imicabango yobugovu emqondweni kaNkulunkulu? Ingabe uNkulunkulu unezinye izinhloso ezengeziwe, mayelana nomuntu, noma ingabe ufuna ukusebenzisa umuntu ngendlela ethile? (Cha.) Akunjalo neze. UNkulunkulu wenza njengoba esho, futhi ucabanga kanjalo enhliziyweni Yakhe. Akanayo inhloso exubile, akanayo imicabango enobunqonqela. Akazenzeli lutho Yena, kodwa umuntu umenzela yonke into ngokuphelele, ngaphandle kwezinhloso Zakhe siqu. Nakuba enezinhlelo kanye nezinhloso ngomuntu, akenzi lutho ezenzela Yena uqobo. Yonke into ayenzayo, uyenzela isintu, ukuvikela isintu, ukuvimbela isintu ukuba singaduswa. Ngakho ingabe le nhliziyo ayilona igugu? Ingabe uyalubona ngisho uphawu oluncinyane lwale nhliziyo eyigugu kuSathane? (Cha)Awuboni ngisho uphawu olulodwa lwalokhu kuSathane. Yonke into uNkulunkulu ayenzayo ibonakala kalula. Ngokubuka indlela uNkulunkulu asebenza ngayo, usebenza kanjani? Ingabe uNkulunkulu uthatha le mithetho nala mazwi Akhe awabophele kuqine emakhanda abo bonke abantu njengamazwi okuloya endilinga yegolide,[a] ewaphoqelela phezu komuntu ngamunye. Ingabe Usebenza ngale ndlela? (Cha.) Ngakho uNkulunkulu uwenza ngayiphi indlela umsebenzi Wakhe? (Uyasihola. Uyaseluleka futhi asikhuthaze.) Ingabe uyanisongela? Ingabe ukhuluma nani agwegwese? (Cha.) Uma ungaliqondi iqiniso, uNkulunkulu ukuhola kanjani? (Uletha ukukhanya.) Uletha ukukhanya kuwe, ekutshela ngokucacile ukuthi lokhu akuhambisani neqiniso, nokuthi kufanele wenzeni. Kulezi zindlela uNkulunkulu asebenza ngazo, ngeke uzwe ukuthi uNkulunkulu ukude nokuthintwa yithi; kunalokho, uzozwa ukuthi uNkulunkulu useduze nawe ngokukhethekile, alikho ibanga phakathi kwenu. Uma uNkulunkulu ekuhola, uma Yena ekuhlinzekela, ekusiza futhi ekweseka, uzwa umusa kaNkulunkulu, ukuhlonipheka Kwakhe, uyezwa ukuthi uthandeka kakhulu, ukufudumala. Kodwa uma uNkulunkulu ekuthethisa ngenxa yokonakala kwakho, noma lapho ekwahlulela futhi ekuqondisa ngenxa yokuhlubuka Kuye, uNkulunkulu usebenzisa yiphi indlela? Ingabe ukukhuza ngamazwi? Ingabe ukuqondisa ngendawo okuyo nangabantu, ngezindaba nangezinto? (Yebo.) Ingabe lokho kuqondiswa kufinyelela kuliphi izinga? Ingabe lifinyelela lifinyelela kulelo qophelo lapho uSathane elimaza khona umuntu? (Cha, lifinyelela ezingeni umuntu angalibekezelela.) UNkulunkulu usebenza ngendlela emnene, enothando, ecacamezelayo futhi enakekelayo, indlela elinganisiwe futhi efanelekile ngempela. Indlela Yakhe ayikwenzi uzwe imizwa enamandla kakhulu, njengokuthi, “UNkulunkulu kufanele angivumele ukuthi ngenze lokhu” noma “UNkulunkulu kufanele angivumele ngenze lokhuya.” UNkulunkulu akakuniki neze uhlobo lwesimo sengqondo olunamandla kakhulu noma imizwa enamandla kakhulu eyenza izinto zingabekezeleki. Akunjalo? Ngisho noma uwemukela amazwi kaNkulunkulu esahlulelo nokusola, uzizwa kanjani-ke? Lapho uzwa igunya namandla kaNkulunkulu, uzizwa kanjani-ke? Uyezwa ukuthi uNkulunkulu unobunkulunkulu futhi akoniwa? (Yebo.) Ingabe uzizwa ukude noNkulunkulu ngalezi zikhathi? Ingabe uzizwa unokwesaba uNkulunkulu? Cha, kunalokho uzwa ukuhlonipha okwesabekayo uNkulunkulu. Ngabe abantu abazizwa zonke lezi zinto ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu? Ngabe bebengaba nale mizwa uma ngabe uSathane esebenzile kumuntu? (Cha). UNkulunkulu usebenzisa amazwi Akhe, iqiniso Lakhe kanye nempilo Yakhe ukuhlinzekela umuntu njalo, ukweseka umuntu. Lapho umuntu ebuthakathaka, lapho umoya womuntu uphansi, uNkulunkulu ngokuqinisekileyo akakhulumi ngesankahlu, ethi: “Ungaphatheki kabi. Yini ekuphethe kabi? Kungani ubuthakathaka? Yini ozoze ube buthakathaka ngenxa yayo? Ubuthakathaka kakhulu futhi uhlala ubhocobele. Yini oyiphilelayo? Vele ufe! Ingabe usebenza ngale ndlela uNkulunkulu? (Cha.) Ingabe uNkulunkulu unalo igunya lokwenza ngale ndlela? (Yebo.) Kepha uNkulunkulu akasebenzi ngale ndlela. Isizathu sokuthi uNkulunkulu angenzi ngale ndlela yingenxa yengqikithi Yakhe, ingqikithi yobungcwele bukaNkulunkulu. Uthando Lwakhe ngomuntu, ukulondoloza nokwazisa Kwakhe umuntu ngeke kuvezwe ngokucacile ngomusho owodwa noma emibili. Akuyona into elethwa ukuziqhayisa komuntu kodwa into uNkulunkulu ayiletha ngokuyenza uqobo; kuyisambulo sengqikithi kaNkulunkulu. Ingabe zonke lezi zindlela uNkulunkulu asebenza ngazo, zingamvumela umuntu ukuthi abone ubungcwele bukaNkulunkulu? Kuzo zonke lezi zindlela uNkulunkulu asebenza ngazo, kuhlangene nezinhloso ezinhle zikaNkulunkulu, kuhlangene nemiphumela uNkulunkulu afisa ukuyifeza kumuntu, kuhlangene ngezindlela ezehlukene uNkulunkulu azisebenzisayo ukusebenza kumuntu, umsebenzi awenzayo, lokho afuna ukuthi umuntu akuqonde—ingabe usuke wabona noma ibuphi ububi noma ubuqili ezinhlosweni ezinhle zikaNkulunkulu? (Cha.) Ngakho kukho konke uNkulunkulu akwenzayo, konke uNkulunkulu akushoyo, konke akucabangayo enhliziyweni Yakhe, kanye nayo yonke ingqikithi kaNkulunkulu ayembulayo—singambiza uNkulunkulu ngokuthi ungcwele? (Yebo.) Ingabe ukhona noma imuphi umuntu owake wabona lobu bungcwele emhlabeni, noma kuye uqobo? Ngaphandle kukaNkulunkulu, ingabe uke wabubona kunoma imuphi umuntu noma kuSathane? (Cha.) Kulokho esesikhulume ngako kuze kube manje, singambiza uNkulunkulu njengoNkulunkulu oyingqayizivele, ongcwele uqobo Lwakhe? (Yebo.) Konke lokho uNkulunkulu akunika umuntu kuhlangene namazwi kaNkulunkulu, izindlela ezahlukene uNkulunkulu asebenza ngazo kumuntu, lokho uNkulunkulu akutshela umuntu, lokho uNkulunkulu akukhumbuza umuntu, konke lokho akwelulekayo futhi akukhuthazayo, kuvela engqikithini eyodwa: Kuvela ebungcweleni bukaNkulunkulu. Uma bekungekho uNkulunkulu ongcwele kakhulu kangaka, akekho umuntu obengathatha indawo Yakhe ukwenza umsebenzi awenzayo. Uma uNkulunkulu ubethatha laba bantu futhi abanikezele kuSathane ngokuphelele, nike nacabanga ukuthi ningabe nisesimweni esinjani namhlanje? Ingabe nihlezi lapha niphelele futhi ninjengoba ninjalo? Ingabe nani ningathi: “Ekuzuleni emhlabeni, nasekwehleni ngenyuka kuwo” ? Ingabe ningachachaza kakhulu, neyise kakhulu futhi niziqhayise ngaphandle kwamahloni phambi kukaNkulunkulu, futhi nikhulume ngale ndlela? (Yebo.) Ningakwenza ngamaphesenti ayikhulu! Ningakwenza nakanjani! Isimo sengqondo kaSathane ngomuntu sibavumela ukuthi babone ukuthi imvelo kaSathane nengqikithi yakhe kuhlukile ngokuphelele kokukaNkulunkulu. Iyiphi ingqikithi kaSathane ephambene nobungcwele bukaNkulunkulu? (Ububi bakhe.) Imvelo embi kaSathane iphambene nobungcwele bukaNkulunkulu. Isizathu sokuthi kungani iningi labantu lingakuboni ukuthi lokhu kuvezwa nale ngqikithi yobungcwele bukaNkulunkulu kungenxa yokuthi baphila ngaphansi kwamandla kaSathane naphakathi egcekeni lapho kuhlala khona uSathane. Abazi ukuthi buyini ubungcwele noma bazi ukuthi bangabuchaza kanjani ubungcwele. Ngisho noma uqonda ubungcwele bukaNkulunkulu, ulokhu ungakwazi ukubuchaza njengobungcwele bukaNkulunkulu nganoma isiphi isiqiniseko. Lokhu ukungafani ekwazini komuntu ubungcwele bukaNkulunkulu.
Bheka emuva empilweni yakho kuze kube manje zonke izinto uNkulunklulu azenzile kuwe iminyaka yonke yokukholwa kwakho. Noma ukuzwa kujulile noma cha, ingabe kwakungabalulekile yini kakhulu? Ingabe kwakungekhona yini lokho okwakudingeka ukuthi ukuthole? (Yebo.) Ingabe akulona iqiniso leli? Ingabe akuyona impilo le? (Yebo.) Ngakho ingabe uNkulunkulu uke wakukhanyisela ukuthi unikele noma yini ukubuyisela emuva noma ukuphinda ukhokhe noma yini emuva kokukunikeza lezi zinto? (Cha.) Ngakho kungani uNkulunkulu enza lokhu? Ingabe uNkulunkulu naye unenjongo yokungena ahlale kuwe? (Cha.) Ngakho-ke ingabe uNkulunkulu ufuna ukwenyukela esihlalweni Sakhe sobukhosi enhliziyweni yomuntu? (Yebo.) Ngakho ingabe yini umehluko phakathi kukaNkulunkulu enyukela esihlalweni Sakhe sobukhosi kanye nokuhlala ngendluzula kukaSathane? UNkulunkulu ufuna ukuzuza inhliziyo yomuntu, ufuna ukuhlala enhliziyweni yomuntu—lokhu kuchaza ukuthini? Ingabe kuchaza ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu ukuthi babe izithombe Zakhe ezidlaliswayo, imishini Yakhe? (Cha.) Ngakho ingabe yini inhloso kaNkulunkulu? Ingabe ukhona yini umehluko phakathi kukaNkulunkulu efuna ukuhlala enhliziyweni yomuntu kanye nokuhlala ngendluzula kukaSathane, ukuphatha kwakhe umuntu? (Yebo.) Ingabe uyifunelani uNkulunkulu inhliziyo yakho? Futhi ngaphandle kwalokho, uNkulunkulu ufunelani ukuhlala kuwena? Ingabe nikuqonda kanjani ezinhliziyweni zenu ukuthi “uNkulunkulu uhlala enhliziyweni yomuntu?” Kufanele senze okulungile kuNkulunkulu lapha, ngaphandle kwalokho abantu bayohlale bengaqondisi bese becabanga bethi: “UNkulunkulu njalo ufuna ukuhlala kimina. Kungani efuna ukuhlala kimi? Angifuni ukuba kube khona ohlala kimi, ngifuna ukuba yimi nje. Uthi uSathane uhlala kubantu, kodwa uNkulunkulu naye uhlala kubantu: Ingabe lezi zinto azifani? Angifuni ukuvumela noma ubani ukuthi ahlale kimi. Ngiyimi.” Yini umehluko lapha? Thatha umzuzu ukukucabanga lokhu. Ngiyanibuza, ukuthi ingabe ukuthi “UNkulunkulu uhlala kumuntu” yisisho esingasho lutho? Ingabe ukuhlala kukaNkulunkulu kumuntu kuchaza ukuthi uphila ezinhliziyweni zenu futhi ungamela wonke amazwi enu nokwenza kwenu? Uma ekutshela ukuthi hlala, ungalokotha ungemi? Uma ekutshela ukuthi hamba uye empumalanga uyalokotha ungayi entshonalanga? Ingabe ukuthi kuhlalwe kuwe kuchaza into efana nale? (Cha akunjalo. UNkulunkulu ufuna umuntu akuphile lokho uNkulunkulu anakho nayikho.) Kuyo yonke le minyaka eminingi uNkulunkulu asephathe umuntu emsebenzini Wakhe kumuntu kuze kube manje kulesi sigaba sokugcina, imuphi umphumela ohloswe kumuntu ngawo wonke amazwi uNkulunkulu awakhulumile? Ingabe kuzoba ukuthi umuntu aphile lokho uNkulunkulu anakho nayikho? Uma sibuka incazelo eqondile yokuthi “uNkulunkulu uhlala enhliziyweni yomuntu,” kungathi uNkulunkulu uthatha inhliziyo yomuntu futhi ahlale kuyona, aphile kuyona futhi akabe esaphinde aphume; Uba yinkosi yenhliziyo yomuntu futhi wazi ukubusa nokuhlela inhliziyo yomuntu ngomathanda, ukuze umuntu enze noma yini uNkulunkulu amtshela ukuthi makayenze. Kuleli zinga lencazelo, kungathi wonke umuntu usephenduke uNkulunkulu, unobuyena bukaNkulunkulu, unesimo sikaNkulunkulu. Ngakho esimweni esinjalo, ingabe umuntu angazenza naye izenzo zikaNkulunkulu? Ingabe “ukuhlala” kungachazwa ngale ndlela? (Cha.) Ngakho, kuyini? Niyazi ukuthi yikuphi ukuphila uNkulunkulu akunika umuntu? Nginibuza lokhu: Ingabe wonke amazwi neqiniso uNkulunkulu alinika umuntu yisambulo sengqikithi kaNkulunkulu nalokho anakho nayikho? (Yebo.) Lokhu kunesiqinisekiso. Kodwa ingabe wonke amazwi uNkulunkulu awanika umuntu akaNkulunkulu uqobo Lwakhe ukuba awenze, akaNkulunkulu ukuba abe nawo? Thatha umzuzu ukucabanga ngakho. Uma uNkulunkulu ahlulela umuntu, ukwenza lokhu ngenxa yani?Yini equkethwe yila mazwi uNkulunkulu awakhulumayo lapho ehlulela umuntu? Ingabe asuselwa kuphi? Ingabe asuselwa esimweni somuntu esonakele? Ingabe umphumela ofezwa ukwahlulelwa komuntu nguNkulunkulu ususelwa engqikithini kaNkulunkulu? (Yebo.) Ngakho ingabe ukuhlala kukaNkulunkulu kumuntu kuyisisho esingasho lutho? Ngokuqinisekile, akunjalo. Ngakho kungani uNkulunkulu esho la mazwi kumuntu? Ingabe yini inhloso Yakhe ngokusho la mazwi? Ingabe ufuna ukusebenzisa la mazwi empilweni yomuntu? (Yebo.) UNkulunkulu ufuna ukusebenzisa lonke leli qiniso alikhulumile empilweni yomuntu. Uma umuntu ethatha lonke leli qiniso kanye nezwi likaNkulunkulu aphinde aliguqulele empilweni yakhe, angakwazi umuntu ukulalela uNkulunkulu ngaleso sikhathi? Ingabe umuntu angamesaba uNkulunkulu lapho? Ingabe umuntu angabalekela ububi lapho? Uma umuntu esefike kuleli qophelo, angakwazi lapho ukulalela ubukhosi nokuhlela kukaNkulunkulu? Ingabe umuntu usesimweni sokuthobela igunya likaNkulunkulu? Lapho abantu abanjengoJobe noPetru befika emphelandaba, lapho impilo yabo ingathathwa ngokuthi seyivuthiwe, lapho sebenokuqonda kwangempela ngoNkulunkulu—uSathane usengabadukisa? USathane usengahlala kubo? USathane usengaphatha ngenkani? (Cha.) Ngakho hlobo luni lomuntu lolu? Ingabe umuntu angazuzwa ngokuphelele uNkulunkulu? (Yebo.) Kuleli zinga lomqondo, ingabe nilubona kanjani lolu hlobo lomuntu osezuzwe ngokuphelele uNkulunkulu? KuNkulunkulu, kulezi zimo, uvele esehlala enhliziyweni yalo muntu. Kodwa lo muntu uzizwa kanjani? Ingabe izwi likaNkulunkulu, igunya likaNkulunkulu kanye nendlela kaNkulunkulu kuphenduka impilo kumuntu, bese le mpilo ithatha yonke ingqikithi yomuntu futhi yenze ukuthi lokho akuphilayo nengqikithi yakhe kwanele ukwenelisa uNkulunkulu? KuNkulunkulu, ingabe inhliziyo yesintu ngalowo mzuzwana isihlala Yena? (Yebo.) Ingabe niliqonda kanjani leli zinga lomqondo manje? Ingabe uMoya kaNkulunkulu ohlala kuwe? (Cha, yizwi likaNkulunkulu elihlala kithi.) Yindlela kaNkulunkulu nezwi likaNkulunkulu eselibe ukuphila kwakho, futhi yiqiniso eselibe ukuphila kwakho. Ngalesi sikhathi, umuntu unempilo evela kuNkulunkulu, kodwa ngeke sithi le mpilo impilo kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, asikwazi ukuthi impilo umuntu okufanele ayithole ezwini likaNkulunkulu yimpilo kaNkulunkulu. Ngakho akukhathaleki ukuthi umuntu umlandela isikhathi eside kangakanani uNkulunkulu, akukhathaleki ukuthi maningi kangakanani amazwi umuntu awathola kuNkulunkulu, umuntu akasoze aba uNkulunkulu. Ingabe lokhu kulungile? (Yebo.) Ngisho noma ngelinye ilanga uNkulunkulu angathi, “Sengihlala enhliziyweni yakho, usunempilo Yami,” ungabe usuzizwa ukuthi unguNkulunkulu? (Cha.) Ingabe ungaphenduka ube yini? Ngeke yini ube nokulalela uNkulunkulu ngokuphelele? Ngeke yini umzimba nenhliziyo yakho kugcwaliswe yimpilo uNkulunkulu akunike yona? Lokhu ukubonakaliswa okujwayeleke kakhulu lapho uNkulunkulu ehlala enhliziyweni yomuntu. Lokhu kuyiqiniso. Ngakho uma ukubuka ngakulesi sibonakaliso, umuntu angakwazi ukuba uNkulunkulu? (Cha.) Uma umuntu esetholile lonke izwi likaNkulunkulu, uma umuntu esekwazi ukwesaba uNkulunkulu nokubalekela okubi, umuntu angakwazi ukuthi abese ethatha ubunjalo bukaNkulunkulu? Umuntu angakwazi ukuba nobuqu nengqikithi kaNkulunkulu? (Cha.) Akukhathaleki ukuthi kwenzekani, umuntu uselokhu engumuntu, ekugcineni. Uyisidalwa; uma usuthole izwi likaNkulunkulu kuNkulunkulu futhi wathola indlela kaNkulunkulu, uba nempilo kuphela evela ezwini likaNkulunkulu futhi awusoze waba uNkulunkulu.